Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezingamisiyo ukusuka eToronto ukuya eDublin eWestJet ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba eziQhelekileyo zaseIreland • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ezi nqwelo moya ziya kuqinisa ngakumbi ubudlelwane beshishini kunye nolonwabo phakathi kweCanada neIreland kwaye ziya kwandisa unxibelelwano phakathi kweemarike ezimbini eziphambili.
Iinqwelomoya ezintsha ezingapheliyo ziye zibekelwe amaxesha amane ngeveki, ukuqala ngoMeyi 15, 2022.
Inkonzo yokuvulwa kweWestJet phakathi kweToronto neDublin iya kusebenza kwiinqwelomoya zeBoeing 737 MAX yeWestJet.
Iinqwelomoya ziya kubonisa inkulumbuso entsha eyenziwe ngokutsha yenqwelomoya, enika amanqanaba amatsha obumfihlo kunye nokuthuthuzela.
Ukuqala kule ntwasahlobo, I-WestJet izakubonelela iindwendwe ngezinye iindlela zokunxibelelana nehabhu yenqwelomoya eToronto ngeenqwelomoya ezintsha phakathi Toronto kunye neDublin. Iinqwelomoya ezintsha ezingapheliyo ziye zenzelwe ukuba zisebenze amatyeli amane ngeveki, ukuqala ngoMeyi 15, 2022 kwaye ziya kunyuka imihla ngemihla ngoJuni 2, 2022.
"Njengokuba imfuno inyuka, siyazi ukuba abahambi bafuna iindlela ezifanelekileyo nezifikelelekayo zokuhamba phakathi kweCanada neYurophu," utshilo uJohn Weatherill, I-WestJet IGosa eliyiNtloko lezoRhwebo. “Njengokuba siqhubeka ukugxila ekwandiseni uthungelwano lwethu ukusuka kolwethu Toronto Eli ziko liza kuqinisa ubudlelwane bamashishini kunye nolonwabo phakathi kweCanada neIreland kwaye lonyuse unxibelelwano phakathi kweemarike ezimbini eziphambili. ”
Iinqwelomoya ezenzelwe ukuqala kule ntwasahlobo, I-WestJet's inkonzo yokuvulwa phakathi IToronto (YYZ) kunye neDublin (DUB) iya kusebenza kwi-WestJet's Boeing 737 MAX moya. Iinqwelomoya ziya kuba nenqwelomoya entsha eyakhiwe ngokutsha yenqwelomoya, enikezela ngamanqanaba amatsha okuzimela kunye nokuthuthuzela, kubandakanya amava okutya okukhanya okungaphaya kunye noqwalaselo lwesihlalo olubanzi lwe2X2.
Iinkcukacha zenkonzo entsha yeWestJet yamaxesha aphakathi kweToronto neDublin:
Umzila Ubuninzi Umhla wokuqala ukumka ukufika
I-Toronto-iDublin 4x ngeveki Ngamana 15, 2022 9: 10 pm 8:45 am (+1)
mihla le Juni 2, 2022
4x ngeveki Okthobha 1- Okthobha 28, 2022
IDublin - iToronto 4x ngeveki Mngo-16, 2022 10: 05 am 12: 40 emva kwemini
mihla le Juni 3, 2022
4x ngeveki Okthobha 2-Okthobha 29, 2022
I-WestJet Airlines Ltd. yinkampani yaseKhanada eyasekwa ngo-1994 eyaqala ukusebenza ngo-1996. Iqale njengenye yeendleko eziphantsi kwiinqwelomoya ezinkulu ezikhuphisanayo zeli lizwe. I-WestJet ibonelela ngenkonzo yomoya ehleliweyo kunye ne-charter kwiindawo ezingaphezu kwe-100 eCanada, e-United States, eYurophu, eMexico, kuMbindi Merika, nakwiCaribbean. Ikomkhulu leenqwelo moya limi kufutshane neCalgary International Airport.